SomaliTalk.com » radio xoriyo
Home » Qoraallada Halkudhegga "radio xoriyo"
Sanad Guradii 25 naad ee Jabhada ONLF oo si weyn looga xusay Magaalada Nairobi.
Iyo Taarikh ahaan sidii Jabhadaas ay ku bilaabatay. Dabaal daga Sanad guurada 25-naad ee Jabhada Wadaniga xoreynta Ogaadeeniya oo ay soo qaban qaabiyeen Jaaliyada Afrikada Barrie ee Soomaalida Ogaadeeniya ayaa lagu qabtay 15/08/2009, Gudaha Magaaladaan Nairobi, gaar ahaan Holka weyn ee Sir Ali Muslim Club. Xafladaan xuska aheyd oo bilaabatay 1:00 pm Duhurnimo ayna kasoo qeyb galeen Dad Boqolaal kor...
Halkudheg: onlf, radio xoriyo
Barnaamijkii Radio Xoriyo 07 August 2009
Ciidanka qalabkasida ee Xoreynta Ogadenya oo saldhigyo ka smaaystay Duleedka Herar. Shirweynihii Jaaliyadaha Ogadenya oo manta ka furmay London-Uk Bashiir Axmed Makhtal oo lagu xukumay xabsi daaim Labo muwaadin oo ogadenya u dhalatay oo loo gacan galiyey ciidamada gumaysiga Itoobiya 15 arday oo Maraykan ah oo laga soo qabtay Herar kadibna lasoo masaafuriyey. Waraysi labo qaybood ah oo aan idiinka...
Halkudheg: ithopia, itoobiya, ogaden, radio xoriyo
Barnaamijkii Radio Xoriyo 03 August 2009. Ciidanka qalabkasida ee Xoreynta Ogadenya oo dagaalo ku naafeeyey ciidanka gumaysiga. Ciidanka gumaysiga Itoobiya oo jidh-dil,xidhay,kufsi iyo hoob hanti ugaystay dad rayid ah. Gabadh ay ciidamada gumaysig itooya kufsadeen kadibna dileen. Shir sanadeedkii jaaliyadda bariga Africa-faraca Nairobi oo guul ku dhamaaday. Waraysi labo qaybood ah oo aan idiinka...